Comments By Postဘာသာမတူတာ ဘာအကြောင်းလဲ.. - မင်းမင်း - KZလတ်လတ်ဆတ်ဆတ် နှင်းသီးပွင့်ဖတ် - ဦးကြောင်ကြီး - အလင်း ဆက် ဘ၀ဆိုတာ ၃/ ၂၀၀၈ - KZ - ရွှေတိုက်စိုးသာယာတင့်တယ် - ဦးကြောင်ကြီး - panpanမစ္စတာ ဒေးဗစ်စပါးကြီးရဲ့မျက်လှည့်ပွဲ - KZ - Foreign Residentကဗျာချစ်သူ များ ၏ ကဗျာပြခန်း အမှတ် (၃) - KyawThein - KZအဖေ့ နှစ်ပတ်လည်နေ့ဟာ ဘယ်နေ့လည်းဗျာ - ဦးကြောင်ကြီး - Myo Thantဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ အထ္ထုပ္ပတ္တိ အကျဉ်း နှင့် ရရှိခဲ့သော ဆုများ - ဦးကြောင်ကြီး - အလင်း ဆက်မေမေရဲ့ Hand Make Wine - ဦးကြောင်ကြီး - Yin Nyine Nwayမယုံလွယ်နှင့်.... - တိမ်မည်း - ရွှေတိုက်စိုးMPU ---- EASi - ရွှေတိုက်စိုး - TNAဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ - TNA - kaiမိုးရာသီနှင့်ကလေးများကျန်းမာရေး - Ma Ma - သခင် mobileချစ်သော မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ ဘယ်လဲ ? - Ma Ma - nay khinအာစရိယ ငါးခုံးမ - kai - အလင်း ဆက်အမျိုးစောင့် ဥပဒေ ဆိုတာ ကို ဒီ လို ထပ် ဖြည့်ကြည့် ရင် မကောင်း ဘူး လား။ - kai - အလင်း ဆက်ပျောက်ဆုံးနေသော နောက်ဆုံးခြေရာ - padauk moe - အလင်း ဆက်``ပိုစ့်အိမ်တွေမှာ ခရမ်းရောင်မီးလေးတွေ စီကာရီကာထွန်းထားတဲ့ရွာဟာ´´ - အလင်း ဆက် - အာဂကျနော်သိတဲ့ ကျားမေမေ - အလင်း ဆက် - ကြက်အူလှည့်လေထဲတွင်လွင့်ပျံ့ခဲ့သော လွင့်ပျံ့နေဆဲဖြစ်သော - အလင်း ဆက် - KZမီးလောင်ဒဏ်ကြောင့် ဝေဒနာပြင်းထန်စွာ ခံစားနေရရှာသော အသက်၉၆နှစ်အရွယ်အဖွားအို တစ်ယောက် - ဦး ကြိမ် - အလင်း ဆက်ဓာတ်ပုံဆရာတွေကို မချစ်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း ၄၁ ချက် - အလင်း ဆက် - ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ်``လမ်းဘေး Talk ´´ - အလင်း ဆက် - TNA၂၀၁၅ခုနှစ် ဘာမားစပရင်း ဒိုင်းလုပွဲဖိုင်နယ် - Wow - ကြက်အူလှည့်ကန္နားစီးမိဂီသို့ ... ငါးစိမ်းသည် ဗားရှင်း - ကိုရင်စည်သူ - Shwe Eiဂီနဲ့ ထွီ ခုမှတွေ့ဒါ - အာဂ - ကြက်အူလှည့်ကျနော်တို့ ရွာထဲမှာဗျာ - အာဂ - အာဂဘာစားရမှာလဲဟင်…. - တိမ်မည်း - Shwe Eiမျက်လုံးလေး ကလည်ကလည်နဲ့ အရွယ်ရောက်လူ အကုန်သိတယ် ... :P - အာဂ - ရွှေတိုက်စိုးမဲရုံသို့လာ မဲပေးကြပါဦး (ဖတ်/ရွေး၊ ဧပြီ+မေ) -etone - ရွှေတိုက်စိုးEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (79096 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70611 Kyats )naywoonni (68478 Kyats )weiwei (67685 Kyats )zaylay (67079 Kyats )cobra (62631 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (61277 Kyats )MaMa (60089 Kyats )Top Posts & Pagesအမျိုးစောင့် ဥပဒေ ဆိုတာ ကို ဒီ လို ထပ် ဖြည့်ကြည့် ရင် မကောင်း ဘူး လား။
၂၀၁၅ခုနှစ် ဘာမားစပရင်း ဒိုင်းလုပွဲဖိုင်နယ်
``လမ်းဘေး Talk ´´